Xildhibaan sheegay in shacabka ay isugu darsameen abaaro iyo dagaalo | raascasayrmedia.com
← Dr Cali Cabdullaahi Cadaawe” Puntland waxay Rabtaa Bad baado Deg Deg ah
Go’aamadii Shirkii “Khaatumo” Ee Aqoonyahanada Dhulbahante-(English) →
Xildhibaan sheegay in shacabka ay isugu darsameen abaaro iyo dagaalo
Mudane ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay isku biirsadeen abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka Soomaaliy.
Xildhibaan Qaliif Jirre Warfaa oo ka mid ah Mudanayaasha barlamanka KMG Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay isku biirsadeen dhibaatooyin aad u farabadan oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka Soomaaliya.
Xildhaabka ayaa waxaa uu sheegay in gobolada ku yaala Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya ay si aad ah u haraysay abaaro baahsan oo saameeyay dadka iyo duunyada ku nool halkaasi, waxaana uu tilmaamay in dad aad u farabadan ay macluul ugu geeriyoodeen deegaanadii ay ku noolaayeen halka kuwa kala ay isaga barakaceen abaarahaasi.
Qaliif Jirre Warfaa ayaa waxaa uu ugu baaqay Hay’adaha samafalka iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qurbo joogta ah inay gar gaar bini’aadanimo oo deg deg ah ay lasoo gaaraan shacabka Soomaaliyeed ee iminka la daalaa dhacaya abaaraha iyo dagaalada ka jira dalka Soomaaliya.
Gobolada ku yaala Koofurta iyo bartamaha dalka Soomaliya, waxaa ka jira abaaro baahsan oo saamayn ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool deegaanada iyo Tuulooyinka hoostaga goboladaasi, iyadoo dadka ay abaartu haysona aysan jirin cid si rasmi ah gar gaar ugu fidisay wallow ay marar badan baaq u direen Hay’adaha samafalka iyo Maamulada ka jira deegaanada ay abaaruhu ku haystaan